यस कम्पनीले १२ दशमलव ६३१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पुस २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । नियामक निकायबाट स्वीकृति पाएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले उक्त लाभांश पाउनेछन् । ६२ दिनको कारोबार अवधिमा कम्पनीको शेयरमूल्य अधिकतम रू. २ सय ५७ र न्यूनतम रू. २ सय ३५ पुगेको छ । आइतवार भएको शेयर कारोबारमा कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा रू. ४ ले घटेर रू. २ सय ४८ मा बन्द भएको छ ।
विक्री चाप : कम्पनीको आइतवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप बढी छ । सो अवधिसम्म २ हजार ९ सय ४० कित्ता शेयर विक्री गर्ने र १ हजार ४ सय २० कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग थियो ।
2019-04-09 - 73 view(s) - abhiyan